Man City 1:0 Man United: Citezens Oo Dubtay Red Devils.+sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Man City 1:0 Man United: Citezens Oo Dubtay Red Devils.+sawiro
Waxaa aqyaareey goordhow soo gaba gaboobey kulankii xiisaha badnaa ee caalamka oo dhan laga daawanayey ee dhex maray kooxaha Manchester City iyo Manchester United waxaana 1-0 kubadiyey Naadiga City oo aad moodey in nasiibku saaciday isla markaana United ay lasoo baxday Cayaar aad u adag.
Manchester United ayaa eersanaysa kadib makii qaybta hore oo dhamaan rabta roose laga siiyey daafaceeda Chris Smalling oo qaatay Jaalihii labaad qaybta koowaad ee cayaarta ayaa kudhamaatay 0-0 balse qaybta labaad ayaa daqiiqadii 63 aad waxaa Gool aad u qurux badan u dhaliyey kooxdiisa Cayaaryahanka dalka Argentina ee lagu magacaabo Sergio Aguero kaas oo 3 da dhibcood ee muhiimka ah usoo hooyey kooxdiisa oo laga badiyey sadexdii kulan ee u dambeeysey.
Garsoore Michael Oliver ayaa qaybta hore ee Cayaarta dhameeyey iyadoo Man City u doodayaan Rigoore ay sheegeen in lagu galay Yaya Toure balse dheg jalaq uma siin sidoo kale waxaa kooxda Red Devils dhaawac daran kasoo gaarey oo Garoonka laga da daamiyey daafaceeda dalka Argentina ee lagu magacaabo Marcos Rojo taas ayaana qayb ka ahayd nasiib darada ku dhacday kooxda Man United.
Kulankaan Darbiga ah ayaa qiimo gooniya waxa uu u leeyhay dadka wada dega Magaalada Manchester oo uu kadhxeeyo xafiiltan aad u adag oo dhanka Sportiga ah waxaana guushaan siweyn ugu farxaya Taageerayaasha Man City iskastoo sanadihii dambaba guushu xagooda u badnayd.
Manchester City ayaa hada waxa ay kujirtaa kaalinta 3 aad waxayna 6 dhibcood kahooseysaa hogaamiye yaasha Horyaalka England ee Chelsea Manchester United ayaa leh 13 dhibcood oo keliya iyagoo ay isku dhibco yihiin kooxaha Everton, West Brom iyo Newcastle.